I-Alchemy Post Sound yenza iNyawo Yayo Ehamba phambili Ekuhambiseni i-Foley ye-"Fosse / Verdon" ye-FX "I-Fosse / i-Verdon" - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Alchemy Post Sound iphakamisa inyawo layo elihamba phambili ekuhambiseni i-Foley ye-"Fosse / Verdon" ye-FX
Ochwepheshe beFoley bahlanganyela nabaHlengisi Bomsindo uDaniel Timmons noTony Volante ngokuphinda bahlaziye imisindo ye-Broadway neyamabhayisikobho eboshwe ngumculi we-choreographer nomculi womculo.
I-Westchester, eNew York- i-Alchemy Post Sound igqoka izicathulo zayo (futhi konke okuningi) ekudaleni umsindo we-Foley I-Fosse / i-Verdon, Uchungechunge olulinganiselwe lwamafayela kaFX olumayelana nomdwebi wezinto zokudlala, uBob Fosse (uSam Rockwell) nomhlanganyeli wakhe nomkakhe, umculi / udansa uGwen Verdon (Michelle Williams). Ukusebenza ngaphansi kokuqondiswa kokuqondisa abahleli bomsindo uDaniel Timmons noTony Volante, umculi weFoley uLeslie Bloome kanye neqembu lakhe benza futhi babhala amakhulu wemikhuba yomsindo ukusekela ukulandelana komdanso wokudlala futhi wengeze amalungiselelo angempela emasethweni awo omlando.
Kuthatha iminyaka engamashumi ayisihlanu, I-Fosse / i-Verdon uhlola ubudlelwane obunothando nobunye phakathi kukaBob Fosse noGwen Verdon. Lowo owayengumengameli wayengumbonisi umenzi wefilimu futhi omunye wabaculi bezingcweti kanye nabaqondisi abanethonya kakhulu, kuyilapho lo mdlali engumdlali omkhulu kunabo bonke be-Broadway.
I-FOSSE VERDON - Ikhethwe: (lr) UMichelle Williams njengoGwen Verdon, uSam Rockwell noBob Fosse. I-CR: Pari Dukovic / FX
Njengoba kunikezwe isihloko, akukumangazi ukuthi umsindo wokuthunyelwa ngemuva kokukhiqiza wawuyingxenye ebalulekile kulolu chungechunge. Ngenxa yezigcawu eziningi zomculo, uTimmons noVolante babenomsebenzi wokubamba imibhede ezwakalayo ezwakalayo ukuze bahambisane nokufundwa komculo futhi bahambisane ngokungenakuqhathaniswa ngamaphuzu. Bakha futhi ama-soundcapes aminyene ukuze abuyele ezindaweni ezihlukile kakhulu zezinkampani zamafilimu nezigaba ze-Broadway, kanye nezinye izindawo eziningi ezingaphandle nezingaphakathi.
I-Timmons ukuxuba umculo nomdlalo wephrojekthi kubhekene nezinselele ezibalulekile zokudala kodwa futhi nethuba eliyingqayizivele. "Ngakhulela eNew York futhi ngasekuqaleni ngithembele ukuthi ngizosebenza ngomsindo ophilile, okungenzeka ku-Broadway," uyakhumbula. "Ngalolu boniso, ngifanele ngisebenze nabaculi abakwenzayo kulelo zwe ezingeni eliphezulu kakhulu. Kwakungekho umbukiso omkhulu wethelevishini njengenhlanganisela yomculo we-Broadway, isenzo se-Broadway nesithelevishini. Kwakumnandi ukusebenzisana nabantu ababesebenza phezulu komdlalo wabo. "
Abasebenzi basebenze ngokuxuba okungafani kwemithombo ekuhlanganiseni umsindo. I-Timmons iphawula ukuthi, ukuze avuselele ukukhwehlela kwe-Fosse (isibonakaliso sokusebenzisa kwakhe imithi kadokotela), bathululela ngeziqu zomsindo kusuka kwifilimu ye-1979 yakudala Yonke leyo Jazz. "U-Roy Scheider, owadlala u-Bob Fosse's alter ego kuleli filimu, wayengakwazi ukukhwehlela njengalokhu, ngakho uBob wangena esikhwameni sokuqopha futhi wenza ezinye zokuzikhwehlela," kusho uTimmons. "Siphelile sisebenzisa lezo zincwadi zokudala kanye ne-ADR yeSam Rockwell. Lapho impilo kaBob iqala ukuya eningizimu, ezinye ukukhwehlela ozizwayo empeleni nguye. Mhlawumbe nginenkolelo-ze, kodwa kimi kwangisiza ukuthatha ukuthi ungubani. Ngangizizwa sengathi umoya kaBob Fosse ukhona lapho. "
Ingxenye enkulu yemiphumela yomsindo wokuthunyelwa yenziwe yi-Alchemy Post Sound. Okubaluleke kakhulu, abaculi beFoley baveza ngokucophelela izinyathelo zabadansi. I-Foley yokudansa ngendwangu ingazwakala kulo lonke uchungechunge, hhayi kuphela ekulandeleni komculo, kodwa nakwezinye izinguquko. "UBob Fosse waqala njengomdanso we-tap, ngakho-ke sasebenzisa imisindo yomsongo njengesizathu se-motif," kuchaza uTimmons. "Uwazwa lapho singena futhi siphume ngokuphuma kwezinto ezihamba phambili kanye ne-monologues yangaphakathi." Kanye neBloome, iqembu lika-Alchemy lahlanganisa abaculi be-Foley uJoanna Fang, abaxube be-Foley uRyan Collison noNick Seaman, no-Foley ongumsizi uLaura Heinzinger.
Ngokumangalisayo, i-Alchemy kwakudingeka igweme ukuletha umsindo "ophelele kakhulu." UFang ubonisa ukuthi izigcawu ezibonisa ukusebenza komculo ezivela kumafilimu zazihloswe ukumela ukukhiqizwa kwalezi zigcawu kunokuba umkhiqizo wokugcina. "Siqaphele ukufaka imisindo yangemuva yemvelo eyobe ihlelwe ngaphambi kokuba ifilimu ihanjiswe kumabhayisikobho," kuchaza, wanezela ukuthi lezo zigcawu nazo zazifuna ukuthi uFoley ahambisane nokuhamba komzimba nabadonseli. "Sichitha isikhathi esiningi sibheke imidwebo yakudala kaBob Fosse ekhuluma ngomsebenzi wakhe, nokuthi wazi kanjani ukuthi wayengeyona nje yabadlali bezinyawo zabadlali, kodwa ukuzamazama nokukhuluma komzimba. Lokhu kuyingxenye yalokho okwenza ubuciko bakhe buyingqayizivele. "
I-FOSSE VERDON "Ubani Obuhlungu" Isiqephu 2 (I-Airs ngoLwesibili, ngo-Ephreli 16, i-10: i-00 ntambama / i-ep) - Ekhethwe: (lr) uSam Rockwell njengoBob Fosse, uMichelle Williams njengoGwen Verdon. I-CR: u-Eric Liebowitz / FX
Ukukhiqizwa kwe-Foley kwakubambisana ngokungavamile. Ithimba le-Alchemy lagcina inkhulumomphendvulwano evamile nabashicileli bezwi futhi belokhu beshintshana futhi behlenga izakhi zomsindo. "Sazi ukuthi singene kulolu chungechunge oludinga ukuletha umlingo ekulandeleni umdanso," kukhumbula umkhiqizi uFoley umhleli uJonathan Fuhrer. "Ngikhuluma ne-Alchemy nsuku zonke. Ngikhuluma noRyan noNick mayelana namathonya esasihlose wona nokuthi bangadlala kanjani ekuxubeni. U-Leslie noJoanna babe nemibono nezinqubo eziningi ezithakazelisayo; Ngangimangalisa ngokungacabangi umcabango abawenza ekusebenzeni, ezitolo, izicathulo kanye nezindawo. "
I-alchemy nayo isebenza kanzima ukufeza ubuqiniso ekudaleni imisindo yezigcawu ezingekho zomculo. Lokho kuhlanganisa ukulandelela phansi izisetshenziswa zokufanisa uchungechunge 'izikhathi ezihlukene. Ngesimweni esivezwe ekamelweni lokuhlela ifilimu kuma-1950s, izisebenzi ezithola umhleli we-Steenbeck oneminyaka engu-70 ubudala ukuze zithwale umsindo wazo oyingqayizivele. Njengoba ukulandelana komculo kuhilelekile okungaphezu kokudansa kwephepheni, abasebenzi baqoqa iqoqo lamakhulu amabili wezicathulo ukuze bafanane nezicathulo ezigqoke abadlali ngabanye kwizigcawu ezithile.
Ezinye imisindo zithola izinguquko ezicashile phakathi nenkambo yochungechunge ngokuphathelene nokuhamba kwesikhathi. "UBob Fosse unenkinga yezidakamizwa futhi kubonakala sengathi uthatha imishanguzo yokulwa nokucindezeleka," kusho u-Seaman. "Esikhathini esidlule, sasiqopha amaphilisi esihlakalweni seglasi, kodwa ngenxa yezigcawu emashumini eminyaka kamuva, sashintshela epulasitiki."
Ubuqili obunjalo bufaka ubuciko kumculo wezwi nokusiza ukuqinisa umlingisi wenkathi, kusho uTimmons. "I-alchemy igcwalise zonke izicelo esizenzile, kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani," kukhumbula. "Inombolo yezicathulo ezazisetshenziswa yayingakahleleki. Abaqhubi be-Broadway bavame ukugqoka izicathulo ngezingubo ezincane ngesikhathi sokuzicubungula nezicathulo ezinezinhlayiya ezinzima uma besondela embukisweni. Izigqoko ezinzima ziyinkimbinkimbi. Ngakho-ke, ithimba leFoley lalihlale liqaphele ukukhetha izicathulo ezifanele kuye ngokuthi yikuphi ukuphindaphindiwe okuvezwe endaweni yesehlakalo. Lokhu kunemba. "
Umzamo owengeziwe futhi wabulethela uFoley ohlangene kalula nezinye izakhi zomsindo, inkhulumomphendvulwano nomculo. "Ngithanda umsebenzi we-Alchemy ngoba unomsindo wangempela, wemvelo futhi ovulekile; akukho umsindo ozwakalayo, "kuphetha i-Timmons. "Kuzwakala sengathi igumbi. Ithuthukisa indaba ngisho noma izethameli zingaboni ukuthi zikhona. Kuhle lokho uFoley. "
Mayelana ne-Alchemy Post Sound
I-Alchemy Post Sound iyinyawo lesigcawu se-3,500, studio eyayizinikezele i-Foley eyenzelwe uFoley ngokuhlala nguFoley Artist Leslie Bloome. Abakwa-Emmy Award Award-winning staff baye badala umsindo wezinkampani eziningi ezibonakalayo ezinkulu, uchungechunge olude lwethelevishini, amafilimu azimele nemidlalo ethandwayo. Izinsiza ze-Alchemy nazo zihlanganisa ukurekhoda komculo, ukusebenza okubukhoma, ukukhiqizwa kwevidiyo, i-ADR, nokuklanywa komsindo.
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida Ukuhlela Foley I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor SJGolden - kuzwakale Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Ubuchwepheshe be-TV	2019-07-10
Ngaphambilini: I-Soularity Sound Relies ku-NUGEN Audio ngemikhiqizo yayo yeRock-Solid kanye ne-Service Customer
Olandelayo: Ukuhamba Kwezithombe Zama-Sun Ukuya Kwenye Inhlanganisela "Nesicabucabu: Ekhaya"